Safiirka Soomaaliya ee Kuwait oo nuqul kamid ah Waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyey Ra’iisul wasaare ku xiggeenka dalkaasi | Baydhabo Online
Safiirka Soomaaliya ee Kuwait oo nuqul kamid ah Waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyey Ra’iisul wasaare ku xiggeenka dalkaasi
Safiirka cusub Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhin doona dalka Kuwait Danjire Cabdullaahi Odowaa ayaa Nuqul kamid ah Waraaqaha aqoonsiga Safiirnimmo u gudbiyey Ku-xiggeenka Ra’iisul Wasaaraha Kuwait ahna Wasiirka arrimaha dibada ee dalkaasi, waxaana kulan ay ku yeesheen xarunta Wasaaradda arrimaha dibada.
Kulanka Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalka Kuwait uu la yeeshay Ku-xiggeenka Ra’iisul wasaaraha Dawladda Kuwait ahna Wasiirka arrimaha dibada ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka ku-xiggeenka Wasaaradda arrimaha dibada, Kaaliyaha arrimaha Maamuuska ee Wasaaradda arrimaha dibada Kuwait, Kaaliyaha Wasiirka arrimaha Dibada, Siihayaha Safaaradda Soomaaliya ee Kuwait iyo Madax kale.
Safiirka cusub Soomaaliya u fadhin doona Kuwait ayaa madaxda dalkaasi ee uu la kulamay waxa uu kala hadlay Xoojinta xiriirka Taariikhiga ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kuwait iyo siddii loo sii dardar gelin lahaa iskaashiga labada dal.
Danjire Cabdullaahi Odowaa Safiirka cusub Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhin doona dalka Kuwait ayaa sheegay in Dawladda Kuwait ay boggaadisay Horumarka iyo dib usoo kabashada Soomaaliya, ayna diyaar u yihiin in ay garab istaagaan Dawladda iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Danjire Cabdullaahi Odowaa ayaa xusay in Madaxda Dawladda Kuwait ee kulanka uu la yeeshay ay u rajeeyeen in uu ku guuleysto Masuuliyada culus ee loo dhiibay.